एनबी इन्सुरेन्सको सेयर लिलामी भर्ने मिति परिवर्तन, अब कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एनबी इन्सुरेन्सको सेयर लिलामी भर्ने मिति परिवर्तन, अब कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं - एनबी इन्सुरेन्सले लिलामी भर्ने म्याद थप गरेको छ । एनबीको लिलामी अब भदौ २३ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । यसअघि कम्पनीले भदौ २२ गतेसम्म लिलामी भर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर आइतबार बकर इदको अवसरमा सार्वजनिक विदा परेकाले १ दिन म्याद थपिएको कम्पनीले जनाएको छ । अब लिलामीको बोलपत्र पनि भदौ २५ गते दिउँसो ३ः३० बजेमात्र खोलिनेछ ।
एनबीले भदौ १४ गतेदेखि सर्वसाधारण समूहको २८ हजार ५८० कित्ता सेयर लिलामी खुला गरेको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ तोकी निवेदन दिनुपर्नेछ । एनबीले असार ५ देखि साउन ९ गतेसम्म २७ लाख कित्ता (१००%) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहको सेयर लिलामीमा ल्याएको हो ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, राष्ट्रिय नाचघर जमल काठमाडौंमा पुग्ने गरी आवेदन फारम बुझाउनुपर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २७ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद र बाँकी सेयर लिलामीमा बिक्री गरिसकेपछि भने चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा एनबीले १० करोड ९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । एनबीको प्रतिसेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ ३९ पैसा (वार्षिक) र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ५१ पैसा छ ।